Solom-borona Uller miaraka amin'ny rindran'asa acetate sy optika X-Polar - ULLER
PREMIUM QUALITIANA MBOLA MISORANA INDRINDRA
Ny solon-tenantsika rehetra dia novolavolain'ireo mpanaingo manam-pahaizana izay mamorona azy ireo avy amin'ny filàn'ny atleta matihanina matihanina ary avy eo izy ireo dia amboarina miaraka amin'ny fitaovana tsara indrindra amin'ny tranokala optika sy kisary tsara indrindra. Ny solomaso isan-karazany ataontsika tsirairay dia nandalo dingana hatramin'ny enim-polo talohan'ny nandaniany ny endriny farany ankoatry ny fandalinana ny fanaraha-maso kalitao sy ny fitsirihana ny kalitao.
Hookipa mainty / mainty
Hookipa mainty / mainty 135.00 € 195.00 €
Hookipa Brown Tortoise / Mainty
Hookipa Brown Tortoise / Mainty 195.00 €
Tavozo / mainty ny Hookipa Maitso
Tavozo / mainty ny Hookipa Maitso 195.00 €
Hookipa mainty / maitso
Hookipa mainty / maitso 195.00 €
Lohasaha Tortoise / Brown
Lohasaha Tortoise / Brown 155.00 €
Tortoise / Black Green
Tortoise / Black Green 155.00 €
Lohasaha Tortoise / Black Blue
Lohasaha Tortoise / Black Blue 155.00 €
Lohasaha mainty / manga
Lohasaha mainty / manga 155.00 €
Tortoise Maitso / Mainty
Tortoise Maitso / Mainty 165.00 €
Ny Tavy Brown Tortoise / Blue
Ny Tavy Brown Tortoise / Blue 130.00 € 165.00 €
Fanahy mainty / maitso
Fanahy mainty / maitso 165.00 €
Fanahy mainty / mainty
Fanahy mainty / mainty 165.00 €
Sokatra / Brown ny Alpine Brown
Sokatra / Brown ny Alpine Brown 130.00 € 175.00 €
Alpine Mainty / Blue
Alpine Mainty / Blue 175.00 €
Alpine Mainty / Mainty
Alpine Mainty / Mainty 175.00 €
Ushuaia mainty / maitso
Ushuaia mainty / maitso 185.00 €
Ushuaia Blue Tortoise / Mainty
Ushuaia Blue Tortoise / Mainty 185.00 €
Ushuaia mainty / mainty
Ushuaia mainty / mainty 115.00 € 185.00 €
Sokatra Ushuaia Brown / Brown
Sokatra Ushuaia Brown / Brown 185.00 €
Ushuaia mainty / manga
Ushuaia mainty / manga 185.00 €
MISY FANDAHORANA AZO ATAO PREMIUM CELUSOSE ACETATE
Frame vita amin'ny cellulose acetates tsara indrindra. Nosafidianay tsara ny andiany rehetra mba hametrahana fa ny vokatra no ho tsara indrindra. Ny firafitra tsirairay dia namboarina sy namboarina avy tamin'ny tanana tamin'ny fomba artisanal tanteraka avy amin'ny sangan'asa mpanao asa tanana, ka noho izany dia manome antoka ny vokatra avy amin'ny Premium mifarana tsara noho ny fenitry ny tsena. Misaotra an'ity, namadika ny solomaso Uller® ho vokatra amin'ny ambaratonga avo indrindra izay mety ho hita amin'ny orinasa optika.
Ahitana ny singa metaly matanjaka amin'ny fitrandrahana avo sy kalitao avo indrindra ny tranobaintsika. Ireo angady misy elany avo dia matanjaka ary mahatohitra, miaraka amin'izay koa, mahatsapa fahatsapana malefaka amin'ny fanaovan-dry zareo. Ny rafitra fanokafana sy fanakatonana tsotra azy io dia natao hanamorana ny fampiononana anao saingy miaraka amin'izay kalitao tsy manam-paharoa izay hanome anao ny fampisehoana tsara indrindra.